inkqubo ubrak unyango lwamanzi (HMJBKRO series) - China Xi'an Homey Technology
inkqubo ubrak unyango lwamanzi (HMJBKRO series)
ukungafunwa ityuwa eliphezulu amtyuba reverse inkqubo kucocwa 3000GPD Le yunithi esetyenziswa ukunyanga amanzi amtyuba kunye TDS of 7000ppm ezinereyithi recovery kufika 70%. Eyona conponents ephambili kwinkqubo eendaba filter ezininzi, isebenze carbon filter kunye kwetyuwa amanzi amtyuba unit.With ukulahlwa netyuwa ophezulu kunye sonsume amandla, ilula kwakhona ufakelo kunye nolondolozo. Le mveliso CE eqinisekisiweyo nomgangatho elungileyo. Intshayelelo esifutshane: 1, Sebenzisa Dow FILMETEC software kuyilo ukubala zilinganisa, ...
Uhlobo: Inkqubo amtyuba amanzi
Raw TDS amanzi: ngezantsi 15000ppm
TDS Isiphumo amanzi: ngaphantsi kwe 600ppm
Isakhelo: carbon steel
Motor Driving: 380V 50HZ 3 isigaba
ukulahlwa eliphezulu ityuwa ubrak inwebu system 3000GPD
Le yunithi esetyenziswa ukunyanga amanzi amtyuba kunye TDS of 7000ppm ezinereyithi recovery kufika 70%. Eyona conponents ephambili kwinkqubo eendaba filter ezininzi, isebenze carbon filter kunye kwetyuwa amanzi amtyuba unit.With ukulahlwa netyuwa ophezulu kunye sonsume amandla, ilula kwakhona ufakelo kunye nolondolozo. Le mveliso CE eqinisekisiweyo nomgangatho elungileyo.
1, Sebenzisa Dow FILMETEC software kuyilo ukubala zilinganisa, ngokubonelela guidline mbono kuyilo
Iinkqubo 2, uyilo eyahlukeneyo ukondla umgangatho wamanzi kunye ofunekayo, la manqaku B2K ezichaphazela emanzini ekrwada kunye umxholo ityuwa 5000ppm-15000ppm. Ukuba umxholo ityuwa singaphezulu 15000ppm pls khetha SW kolandelayo olwandle
3, Unique amanzi ngokuzenzekelayo isixhobo replacement endaweni mxube kwi inwebu ngamanzi ahlaziyekileyo xa inkqubo eyeka zokunciphisa ungcoliseko inwebu, ngoko kuyolula ubomi inkonzo kunye nendleko eziphantsi.
4, carbon camera kwaye isakhelo steel stainless sokukhethwa, amavili ihamba ingafakwa kwisimo ezahlukeneyo ufakelo
5, ezingatyiwa-mhlwa kunye SCH80UPVC imibhobho kunye kwizinga eliphezulu ukuqinisekisa akukho kukuvuza umhlwa ngaphantsi koxinzelelo oluphezulu
impompo yamanzi okrwada + nesanti dust lokucoca + carbon obusebenzayo + mpahla + micron lokucoca + pump nehigh + inkqubo RO.
Power supply 220 / 380V, 50Hz / 60Hz for ozikhethelayo. Le Isakhelo carbon zentsimbi kunye steel stainless yokuzikhethela.
HMJBK9RO seires- Ukuze yokuphatha amanzi ekrwada kunye TDS ngaphantsi kwe 9000ppm
HMJBK15RO seires- Ukuze yokuphatha amanzi ekrwada kunye TDS ngaphantsi kwe 15000ppm
1.DOW inwebu yogcino loxinzelelo 2.FRP 3.sediment filter 4.SS pump presure high centrifugal
inkqubo 5.cleaning 6. inkqubo replacement amanzi 7. carbon steel isakhelo camera
NGEEKHOMPONENTI OZIKHETHELA ZONA
lokucoca 1.multi-media isakhelo 3.stainless intsimbi 2.activated carbon lokucoca ulwelo
Previous: inkqubo yokucoca amanzi Standard RO (HMJRO-6000LPH)
Eyindawo Treatment Water